Branch Manager & Chief Loan Officer
Posted on 16/05/19 22:14 by Myanmar Finance International Limited
Job Start Date: 17.5.2019
Branch Manager (M/F – 1 Post)
1. အသက်(၂၅-၄၀) နှစ်ကြားဖြစ်ရမည်။
2. တက္ကသိုလ် တစ်ခုခု မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
3. MS Office ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုတတ်ရမည်။
4. အခြေခံအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ပြောဆိုရေးသားနိူင်ရမည်။
5. စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်ပြီး ၊ အဖွဲ့အစည်းကို ဦးဆောင်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။
6. အချိန်နှင့် တပြေးညီဆောင်ရွက်ပြီး စီမံခန့်ခွဲကောင်းမွန်ရမည်။
7. မိမိလက်အောက်ဝန်ထမ်းများကို ကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိူင်ရမည်။
8. အသင်းအဖွဲ့နှင့် ဦးစီးဦးဆောင် လုပ်ဆောင်နိူင်ရမည်။
9. ဖိအားနှင့် အလုပ်ဒဏ်ကို ခံနိူင်ရမည်။
10. Microfinance လုပ်ငန်းတွင် Branch Account Officer , Chief Loan Officer နှင့် တခြားအလားတူ ရာထူးမျိုးတွင်အနည်းဆုံး အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်ရှိသူ(သို့မဟုတ်) ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း/လုပ်ငန်းများတွင် Assistant Manager ရာထူးဖြင့် အနည်းဆုံးအတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
11. ဆိုင်ကယ်စီးတတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်ကယ်မောင်းလိုင်စင်လည်းရှိရမည်။
Chief Loan Officer (M/F – 1 Post)
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး - တောင်ငူရုံးခွဲ
1. အသက် (၂၅-၃၅) နှစ်ကြားဖြစ်ရမည်။
2. တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
3. ကွန်ပျူတာ MS Office ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုတတ်သူ၊ လက်ရှိ MFIL တွင် Loan Officer / Cashier အဖြစ် အနည်းဆုံး (၁)နှစ်ခန့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသူ (သို့) Micro Finance လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၂) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
4. Reporting Deadine များအတိုင်း လုပ်ငန်းပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။
5. တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။
6. မိမိလက်အောက်ဝန်ထမ်းများကို ကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိူင်ရမည်။
7. အသင်းအဖွဲ့နှင့် လက်တွဲညီညီ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။
8. အထက်ဖော်ပြပါ နေရာများတွင် မည်သည့်နေရာကိုမဆို တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။
More jobs from Myanmar Finance International Limited